Zeeytiin zeeytuunaa dhibee kaansariitiif dawaa ta’uun nimala jedhame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Zeeytiin zeeytuunaa dhibee kaansariitiif dawaa ta’uun nimala jedhame
Nyaanni naannoo galaana Mediteraaniyaanii tajaajila fayyaa danuu qaba
Zeeytiin zeeytuunaa [olive oil] dhibee heddu namarraa ittisuufis ta’ee erga dhibeen qabamaniis nama fayyisuu kan danda’u ta’uu isaati kan yeroo heddu himamu. Zeeytiin kuni keessumattuu dhibee onneetiif namoota heddu biratti akka dawaa guddaatti kan ilaalamu. Qorannoon haarofni barruu ‘Molecular and Cellular Oncology’ jedhamu irratti tibbana bahe tokko zeeytiin kuni seelii kaansarii kan dafee dhabamsiisuu ta’uu isaati kan mirkaneesse.
Qorattoonnii wolitti hidhata zeeytii kanaafi dhibee kaansarii jidduu jiru irratti qorannoo geggeessan kan bira gayan kompaawundiin ‘oleocanthal’ zeeytii kana keessatti argamu du’a ykn dhumaatii seelii kaansariitiif sababa ta’eera. Akka qorannoo kanaatti oleocanthal seelota kaansarii hintaane kophatti dhiisuudhaan isaan kaansarii yeroo daqiiqaa 30 hanga sa’aa tokkoo keessatti ajjeese. Tankaarfiin oleocanthal seelii kaansarii kophatti cokuudhaan irratti fudhatu kuni oleocanthal waan wol’aansa kaansariitiif tajaajila laatuu malu ta’uu isaati kan qorataan qorannoo kanaa Paul Breslin abdatu.
Kompaawundiin oleocanthal seelii fayyaa qabu dhiisee isaan kaansarii ajjeesuun isaa kaansarii dhabamsiisuu irratti shoora guddaa qabaata abdii jedhutu jira. Garuu oleocanthal akkamitti seelota dhibaman isaan fayyaa qabaniin adda baasee tankaarfii akkasii akka irratti fudhatu wonti qorattoonni ammatti hubatan ykn ibsan tokko hinjiru.
Nyaanni naanno galaana Mediteraaniyaanii fayyaaf tajaajila guddaa akka qabuudha kan yeroo hedduuf himamaa ture. Oleocanthal zeeytii zeeytuunaa keessatti argamu faaydaa dhibee kaansarii faccisuu qabaachuun isaa nyaanni naannoo sanii xiyyeeffannaa dabalataa akka argatu taasisuun isaa waan hinolle.
Previous articleDaandii 8 ijoollee gamnummaafi gammachuun guutaman ittiin guddisuun danda’amu
Next articleLammiileen UAE 4 lammii Itoophiyaa bifa suukkanneessaa ta’een ajjeesan mana hidhaatii gadi lakkifaman